Global Voices teny Malagasy » Iran: Fampielezan-kevitra hamotsorana an’ilay mpitoraka blaogy an-tsary Hamed Saber · Global Voices teny Malagasy » Print
Iran: Fampielezan-kevitra hamotsorana an'ilay mpitoraka blaogy an-tsary Hamed Saber
Voadika ny 29 Jolay 2010 3:04 GMT 1	 · Mpanoratra Fred Petrossian Nandika miora
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Iràna, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Politika, Saripika, Zon'olombelona
Mihoatran'ny 70 ireo Iraniana mpianatry ny anjerimanontolo sy ireo mpianatry ny ambaratonga ambony no mitaky  [fa] ny famotsorana an'i Hamed Saber, mpitoraka blaogy an-tsary Iraniana sy mpikirakira solosaina voasambotra noho ny antony tsy fantatra ny 21 Jona 2010 tany Tehran rehefa nandeha teny an-dàlambe. Nisy namana iray nampandre anay fa vao voalohany izao i Hamed Saber no voasambotra. Ity loharanom-baovao ity ihany no niteny fa batsaka tamin'ireo sary nalain'i Hamed  mikasika ny hetsika fanoheran'ireo Iraniana no nivoaka tany amin'ireo gazety vahiny nefa tsy nahalàla akory izy.
Mpamolavola ny “Access Flickr “ihany koa Hamed, fanitàrana ny “browser”-n'ny aterineto Firefox handinganana ny fanivanana ireo vohikala fizarana sary Flickr any Iran, Emirats Arabo mikambana, Arabia Saodita, Sina ary ireo toerana hafa izay maha voarara izany. Iray amin'ireo naman'i Hamed no nampiseho  taratasy tao amina forum ao amin'ny Flickr hitadiavany fanohanana an'i Hamed:
Ny sasany aminareo mety efa mahalala, efa ho iray volana izao i Hamed Saber ilay namana malalantsika, artista ary nanangana ny vondrona Iraniana ao amin'ny Flickr no voasambotra noho ny antony tsy mazava.
Tsy misy vaovao momba azy ankoatra ny antso an-taroby roa avy amin'ny toerana tsy fantatra.
Ny vondron'ireo namany hatrizay, ireo mpiara-mianatra taminy tany amin'ny anjerimanontolo ary ireo mpampianatra any amin'ireo anjerimanontolo malaza maneran-tany no namoaka taratasy mangataka ny famotsoranan an'i Hamed.
Isika rehetra dia efa ela ela ihany izao no mahafantatra azy, nanomboka ny andro voalohany naha mpikambana antsika tao amin'ity vondrona ity na mety tamin'ireo fandehandehanana niarahantsika taminy.
Maro amintsika no nanomboka naka sary tao amin'ny Flickr ary indrindra ity vondrona ity izay nahazoana namana mandrapahafaty mihitsy aza. Raha izao manokana dia mahatsapa aho fa ananany trosa noho ny nahitako namana artista maro teto ary tato amin'ity vondrona ity.
Androany dia migadra noho ny antony tsy mazava izy ary fanararaotana izao hanehoatsika ny fisakaizàntsika sy ny fankasitrahantsika azy.
Miheritreritra aho fa afaka manoratra taratasy na fanambarana isika ary manohana ny toerany amin'ny maha artista sy namana azy ary mangataka ny famotsorana azy.
Tsy dia mahay manoratra loatra ao, fa na tsikera na hevitra na toro-hevitra ho fiombonana antoka avy amin'iza na iza dia afaka hanampy, noho izany dia apetraho ny hafatra ry havako isany, mila mandray andraikitra isika ary haingana.
Ireo naman'i Hamed ao amin'ny blaogy “Free Hamed Saber (Avotsory Hamed Saber) ” nanoratra  [fa]:
Saber, ilay nibata ny medaly alimo tamin'ny fifaninanana eran-tany momba ny siansa , dia nanana fahafahana hifindra monina nefa naleony nijanona teto Iran ary miasa ho an'ny “fahaleovantena sy fivoarana ara-ekonomikany.”
Ny fanambarana dia mitaky ireo mpitondra Iraniana hanome an'i Saber fitsarana tsy miangatra/ara-drariny.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/07/29/7695/
 sary nalain'i Hamed: http://www.flickr.com/photos/hamed/sets/72157619809375336/
 Access Flickr: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/4286/